Ukuthola iminyuziyamu yamahhala esikhathini sethu akuyona into elula. Akumangalisi ukuthi ngonyaka odlule cishe bonke abantu base-Ekaterinburg babuthana ukuze babheke inhliziyo enamitha amathathu enesisindo sama-kilogram ayi-50 . Lesi sichazamazwi sasitholakale phakathi nosuku, emva kwalokho izondlo ezivela kubakhiqizi baseYurophu nasezifuywayo zathengiswa izakhamuzi.
Futhi ungathanda ukwazi ukuthi yimaphi amaswidi abantu baseRussia abazilimaza ngamaholidi? Yayiyini iRussiaad yase-Russian yokupheka isinkwa epheka? Yimaphi amasiko okuphuza itiye ayekhona phakathi kwezizwe zamaSlavic? Izimpendulo zale mibuzo neminye zingatholakala edolobheni laseZvenigorod. Kulo dolobha edolobheni elisendaweni ye-museum enhle kakhulu, ethokomele futhi ethakazelisayo.
Wabonakala eminyakeni emibili edlule ngenxa yomculi uTatiana Feina kanye neqembu lakhe elinethalente. Ukubhala ngesandla kombhali womsunguli kungabonakala kuwo wonke amamithamitha: ukuqala ngezithombe ngezindaba ezithandekayo nokuphela ngezibani zangempela kanye nezinto zokukhishwa zakudala.
I-Russian Dessert Museum eZvenigorod
Itholakala endlini eyakhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-19, elikuloluhlu lwamagugu amasiko. Ngesikhathi isakhiwo singumthengisi uFokina, owathengisa izimpahla ezitolo ezincane: itiye, ufulawa, ushukela. Mhlawumbe, yingakho ukuchazwa kwetiyi-dessert kubonakala kunemvelo kakhulu emnyuziyamu.
Kuze kube manje, iqoqo lemyuziyamu lisemahholo amabili. Phakathi kwezindonga kunezinkomishi zasendulo. Amashalofu ahlotshisiwe agcwele ama-saucepan antique, ama-dessert, amaswidi, ama-herbs omisiwe, ukupheka okupheka kanye nezincazelo kubo.
Ngokuphelele, iRussia Dessert Museum inezinhlobo ezintathu zokubhoboza, ngakho-ke akukho cishe udonga lapha. Ukufakelwa kuhlotshiswe ngezibani zokukhanyisa izibani. Futhi ezindongeni mahhala ngamabhodlela, imidwebo edwetshwe ngumsunguli wezemyuziyamu.
Kulo gumbi elifanayo, kunezinsimbi ezimangalisayo neziyingqayizivele, okubonakala kubenza kube nzima ukuqagela injongo yabo yangempela. Isibonelo, kukhona i-guillotine yamapulangwe phambi kwakho, kodwa empeleni kuyikhophi ye-juicer yalezo zikhathi.
Lapha, iningi lesikhala lihlala ngesitofu saseRussia. Eqinisweni, unezinhloso ezimbili: Ukushisa igumbi nokupheka ukupheka emakilasini aphezulu.
Kusukela efenisha kuphela izihlalo ezidwetshiwe netafula. Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe kwiziqephu eziqhakazile ze-museum. Isibonelo: "Izinyosi ezinhle kakhulu zisebenza kithi".
Ngokomsunguli, izingoma ezintathu ezithakazelisayo zizovula maduzane:
"Esikhathini somlilo waseRussia."
"Indlela yokuhlela ukuhweba amaswidi."
Ukwakhiwa kwesitofu esinezintambo ezimbili sekuvele sekuphele, lapho i-dessert namaswidi azobhaka ukuthengiswa esitolo esisha. Manje kukhona imikhiqizo yokuhweba evela kubakhiqizi abanobungane.
Kulesi sihloko, awukwazi ukungabaza: kanye ngesonto, abasebenzi besimiso bachitha usuku lonke eLatin Library, lapho bafunda khona ingobo yomlando wezolimo. Kodwa ukulungiswa kwamaswidi aseRussia endala akusho neze ukuthi kukhona isitofu. Iningi leminyuziyamu yamahhala yama-dessert, kuhlanganise neZvenigorodsky, hhayi nje ukunikeza izindlela zokupheka, kodwa futhi iyazivumelanisa nezimo zanamuhla, okungukuthi, ukusebenzisa isitofu segesi.
Njengoba kwenzeka, indlela yokuphatha isayensi, kodwa ukunikezwa kuyintando yeningi. Ukuqhathanisa: emnyuziyamu wezokuvakasha ze-Kolomna pastille kufana nokusebenza kwezemidlalo, futhi ku-Zvenigorod ngeke ubone noma ubani kuma-crinoline.
Naphezu kwentombazane encane, i-Museum ye-dessert yaseRussia iyathandwa kakhulu. Ngakho-ke, kunconywa ukubhuka amakhono amakilasi nokuvakashela kusengaphambili.
Esikhathini esitolo emnyuziyamu, noma ubani angathenga itiye le-herbal, ikhofi, futhi, okwamanje, amaswidi alungiselelwe ngokusho kokupheka kwendabuko futhi ngaphandle kokufaka imibala engavamile kanye nemilondolozo. Isibonelo, ukukhwabanisa kwesiRashiya kunika ukukhiqizwa kusuka esifundeni saseTula. Futhi lapha ungathola amaswidi kusuka esifundeni saseSmolensk nenkampani encane yokudla yaseMoscow.
Uhambo ngalunye luphela ngekomishi elimnandi letiyi kanye ne-gingerbread.
Ngokuqondene namakilasi aphezulu, afana nalabo abadala nabantwana. Lapha uzothola ukulungiselela inhlama yama-pie emvubelo, ihhavini, ukuveza izimfihlo zokulungiselela ama-dessert ngaphandle kokushukela, futhi uchaze nencazelo nomlando wokubukeka kwamazwi amaningi ase-Old Russian, isibonelo, "finyelela isibambo."
Njengombukiso wabangani noma wena, ungathenga izincwajana ngokupheka. Akuthakazelani ukupheka amaswidi omlando kanye nama-dessert wena ekhishini lakho?
Izindleko zokuvakasha namahora okuvula
Ukungena kukhululekile, kodwa ukuvakasha kwe-museum kwenziwa imali. Ngezinsuku zamasonto izindleko zamathikithi omdala zingama-ruble angu-300, ingane (kuze kube ngu-12 iminyaka) - ama-ruble angu-200. Ngezimpelasonto ukuthenga ithikithi kuzodingeka ukuba ruble 100 ngaphezulu.
I-Russian Dessert Museum ivuliwe nsuku zonke kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-8 ntambama, ngaphandle kwezinsuku zokuhamba namaholide.
Ukuvuselela amasiko: zokupheka zasendulo zaseRussia ze-dessert
Njengoba wazi, abathengisi baseRashiya babenezihlobo eziseduze namazwe ase-Arab. Akuyona into engafanelekile ukuthi i-candy yokuqala ye-pasta eyaziwayo iye yaqhathaniswa ne-eastern rahat-lukum. Yiqiniso, izithako eziyinhloko ze-dessert yaseRussia zaziyi-apula noju. Ngekhulu le-15, amaprotheni ayengeziwe ukwenza amakhekhe amhlophe amnandi. Imfihlo ye-pastilla yaseKolomna (ngendlela, eyiphundu kunazo zonke) kuze kube yisikhathi esithile sigcinwa ngokuqiniseka okukhulu, kuyilapho ama-confectioners aseFrance engacabangi ngokungeza u-apula we-apula kuwo. Ekugcineni, yaba yinto eyaziwa futhi ethandekayo - i-marshmallow.
Ngesikhathi esifanayo, abakhiqizi baseRashiya banquma ukubuyisela uju ngoshukela, futhi lokhu kuyisisetshenziswa esetshenziswa ekwakheni ama-pastilles kuze kube yilolu suku.
Ukuze ulungiselele uzodinga:
0.5 kg we-apula puree;
170 g. Ushukela ogqamile;
Hlanganisa amazambane aphehliwe ngoshukela.
Engeza iphrotheni bese uqala ukushaya. Ukuze uthole ivolumu edingekayo nomthunzi omhlophe, kuthatha imizuzu engu-5-7.
Umswakama obangelwayo usakazeka ebusweni buka-3 cm esikhwameni esabekwe kusengaphambili.
Vula i-ovini bese ubeka imodi ku-70 o C.
Beka ishidi lokubhaka kuhhavini bese umisa ubumnandi okungenani amahora angu-5. Ngezinye izikhathi kuthatha cishe 8.
Susa okunamathiselwe okwenziwe ngokucophelela kusuka ephepheni, ufafaze ushukela oluyimpuphu bese usebenza ngendlela eqoshiwe.
Isikhumbuzo sase-Russian. Zenziwe ngenhlanganisela kafulawa noju nge-add juice ka-berry. Kodwa bathola igama elithi "gingerbread" kancane kancane. Ngemuva kwezinongo zivele iresiphi evela eNdiya. Isanqante esidumile kakhulu i-Tula. Ibukeka njengetayili emaceleni egcwele ukugcwalisa.
"Ubisi lwe-Bird" - mhlawumbe uhlobo oluhle kakhulu lweRussia kanye nekhekhe lokuqala, lathola ilungelo lobunikazi ezinsukwini zenhlalo yezenhlalakahle. Wakhiwa yizinkontileka eziningana ngaphansi kokuqondiswa kwekhanda elinetalente lenye yezindawo zokudlela zaseMoscow, uVladimir Gulnik.
I-apple ephekiwe. IRussia iyizwe elisenyakatho, ngakho-ke ubuningi bezithelo ezihlwanyelwe lapha buyinto encane. Ngakho isisekelo se-dessert sasivame ukuba nama-apula. AmaRussia aseMdabu ayebhekwa njengezinhlobo ze-asidi, kodwa ochwepheshe abanamakhono aphelile bathola indlela yokuwashintsha waba mnandi. Okokuqala, ama-apula ayefakwa emagqumeni e-syrups nama-berries. Khona-ke ama-cores aqoshwa esithelweni, agcwala ukugcoba okumnandi nokupheka. Ngenxa yalokho, akubanga nje kuphela okumnandi, kodwa futhi nesidlo esiwusizo. Emapula asebhaka kuningi lwe-potassium nensimbi, ngakho banconywa ukuthi bayisebenzise ukuze basetshenziswe isisindo kanye nokudla okuhlukahlukene.
Bambalwa abantu abazi, kodwa isigaba esithi "amaswidi aseRashiya" angafakwa futhi ikhekhe elidumile "ePrague". Ngokusho iresiphi, kufana ne "Sacher". Umlobi we-dessert wayeyi-Russian confectioner uVladimir Guralnik, owafunda ekuqaleni komsebenzi wakhe nabalingani baseCzechoslovak. Ukuze enze ikhekhe lakhe, wasebenzisa izinhlobo ezine zokhilimu, ezazihlanganisa i-cognac kanye nama-liqueurs, namaqebelengwane afakwe i-rum. Ngendlela, isibonisi sase-Austria asikho ukhilimu nhlobo. Kodwa ngeshwa, ikhekhe "i-Prague" ayingekho ilungelo lobunikazi ngaleso sikhathi, futhi manje noma iyiphi ifoni inelungelo lokuyilungiselela.
Omunye ummeleli wama-sweets aseRussia angumdabu we-cheesecake. Mhlawumbe, lena yi-dessert eyiminyaka eminingi kakhulu, eyabonakala ngezikhathi zamazwe aseSlavic asendulo. Ukulungisa i-cheesecake, kwadingeka imvubelo inhlama, okuvela kuwo amaqebelengwane amancane. Isikhungo somkhiqizo sasicindezelwe kancane futhi sigcwele i-cottage shizi, i-jam noma i-jam.
Naphezu kokulula kwezokupheka ezinikezwe, lezi amaswidi aseRussia namanje zidinga kakhulu futhi zivame ukukhanya phezu kwamashalofu esitolo. Uma i-pastille nekhekhe "iPrague" ingatholakala emnyangweni we-confectionery, ama-cheesecake athengiswa kuphela ebhikawoti.
Imyuziyamu "Mosfilm": isithombe, ukubuyekezwa, ikheli